नेकपामा भालेवादी चिन्तन हाबी भयो : नविना लामा - Himali Patrika
नेकपामा भालेवादी चिन्तन हाबी भयो : नविना लामा
हिमाली पत्रिका २८ पुष २०७६, 10:22 am
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद नविना लामाले नेकपामा भालेवादी चिन्तन हावी भएको आरोप लगाएकी छन् ।
लामाले आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नेकपामा भालेवादी चिन्तन हावी भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेकी हुन् । नेकपाले उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएपछि सांसद लामाले आक्रोस पोखेकी हुन् ।
उनले उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेसँगको फोटो राख्दै लेखेकी छन्, ‘विधावारिधि गरेको, कानुन व्यवसाय अभ्यासरत, अखिलको उपाध्यक्ष भैसकेको, लामो र अनवरत कम्युनिष्ट राजनीतिमा लागेको, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य रहेको, जातीय राजनीतिको हावामा विचारले नडगमगाएको, महिला त्यो पनि जनजाति पृष्ठभूमिको शिवमाया दिदी महिला सभामुखमा अयोग्य हुने हो भने हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेकपामा भालेवादी चिन्तन कति बलियो रहेछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु पर्छ ।’
संसद सचिवालयकी कर्मचारीले बलात्कारको आरोप लगाएपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएका थिए । त्यसयता प्रतिनिधिसभा सभामुखविहीन छ । सभामुख चयनका पार्टीभित्रै विवाद रहेकाले नेकपाले सभामुखको उम्मेदवार चयन गर्न सेकेको छैन ।
उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले पनि सभामुखमा आफ्नो दाबी पेश गर्दै आएकी छन् । तर, पार्टीका शीर्ष नेताहरुले उनलाई सभामुख बनाउने संकेत गरेका छैनन् । उनलाई प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजीनामा दिन आग्रह गर्दै आएको छन् ।
साथै, नेकपा सचिवालयले पनि उपसभामुख तुम्बाहाङफेलाई राजीनामा दिन लगाउने निर्णय गरेको छ । उपसभामुख दुवै आग्रहलाई नकार्दै राजीनामा नदिने अडानमा छिन् ।